Ladoan'i Guatemala | Vaovao momba ny dia
Fomba amam-panao any Goatemala
Mariela Carril | | kolontsaina, Guatemala
Amerika dia kaontinanta manan-karena amin'ny kolontsaina sy ny tantara ary ny tapany afovoany dia manana lova Maya lehibe izay tsy voafetra ho any Mexico, araka ny eritreritry ny olona sasany tsy eo. Eto Amerika Afovoany dia Guatemala ary anio isika hiresaka ny fanaon'izy ireo.
Raha mijery sarintany ianao dia ho hitanao fa kely ny firenena, fa ny tena izy dia ny geografia tery ao aminy no mampivondrona toetrandro sy endrika maro samihafa. Tahaka ny misy ala orana dia misy koa honko ary toy ny a lova Hispanika matanjaka el lova mayan milaza koa ankehitriny.
2 Fomba amam-panao any Goatemala
Tamin'ny andron'ny fanjanahantany, ny faritanin'i Goatemala Izy io dia ampahany amin'ny Viceroyalty of New Spain fa talohan'ny fananan'ny Maya sy Olmec. Ny fahaleovan-tena dia tonga tamin'ny 1821, rehefa lasa Fanjakan'i Goatemalà izy ary avy eo nanjary ampahany tamin'ny Fanjakana Meksikana Voalohany sy ny Repoblika federaly Amerika afovoany, hatramin'ny farany tamin'ny 1874 dia teraka ny repoblika ankehitriny.
Ny fiainana politika eto amin'ity faritr'i Amerika ity dia voamariky ny tsy filaminana, jadona ary ady an-trano. Eto izay rehetra nifarana tamin'ny 1996 fotsiny ary nanomboka teo dia nilamina ny raharaha, na dia tsy midika aza izany fa navela ny fahantrana sy ny tsy fitoviana.
Araka ny voalazantsika tetsy ambony manana jeografia isan-karazany. Manana tendrombohitra, torapasika amoron-dranomasina Pasifika sy honko maro izy ity, ka mankafy mahafinaritra fahasamihafana biolojika izay miara-dia amin'ny mahafinaritra fahasamihafana ara-kolotsaina. Misy fiteny maro vondrona fiteny 20 mahery raha ny marina, amin'ny totalin'ny mponina manodidina ny 15 773 arivo olona.
Misy ny fotsy, misy ny mainty, vitsy ny aziatika, ny vazimba ary metisy maro, ireo roa ireo dia saika mizara mitovy.
Satria misy vondrona fiteny maro dia maro samy manana ny akanjony mahazatra miaraka amin'ny marika, fomba ary ny lokony avy na dia amin'ny ankapobeny aza misy mavo, mavokely, mena ary manga. Tena mamirapiratra eto ny akanjo ary izy ireo no mpandray anjara fototra.
Ohatra, any an-tendrombohitra Altos Cuchumatanes, ireo vehivavy ao an-tanànan'i Nebaj dia miakanjo zipo mena misy fehiloha mavo, miaraka amin'ny fehikibo sy blouse efajoro mahazatra antsoina hoe huipil. Manao palitao misokatra miaraka amina palma sy pataloha ilay rangahy.
Misy faritra hafa, ohatra, ao an-tanànan'i Santiago any Maya, izay misy volomparasy ny huipil vehivavy, misy fehikibo sy peta-kofehy voninkazo sy biby. Ny marina dia arakaraka ny itetezanao an'i Guatemala no mahamaro isan-karazany ny akanjo nentim-paharazana. Ho tsara tarehy aminao daholo izy rehetra.
fa manao ahoana ny Goatemalàna? Voalaza fa izany fomban-drazana tokoa izy ireo ary na dia firenena maoderina aza ny fomban-drazana taloha sy Hispanika dia mbola eo foana. Ohatra, ohatra ny fialantsasatra ara-pivavahana. Izany dia ny fahatsiarovana ny ny andron'ny olo-masina sy ny Fanahy Masina eo anelanelan'ny 1 sy 2 novambra, fetibe misy fiaviany alohan'ny Hispanika izay tsy tadidy ny daty niaviany.
Nanaja ny maty hatrany ny Goatemalteka, ela be talohan'ny Kristianisma, ary raha ny tena izy dia ireo mpanjanatany no naka ireo fankalazana ireo ary nanao azy ireo manokana hisarika ny vazimba teratany ho any amin'ny laharany. Ho an'ireo daty ireo manakaiky ny fasana ny fianakaviana ary mamela sakafo sy zava-pisotro amin'ny fomba amam-panao antsoina hoe lohanya.
Ity fomba amam-panao ity dia taloha ary ny famelabelarana ny sakafo iray nantsoina mafy izay espaniola kokoa.
Ny Espaniola dia nitondra omby sy biby fiompy ary ny vazimba dia nanamboatra ny zava-drehetra. Ilay hena mangatsiaka malaza mahatratra 50 ny akora ary toa salady mangatsiaka kokoa. Ny Espaniôla ihany koa dia nanaiky ny fanajana ny fitondrana voninkazo any am-pasana ary tato ho ato, toy ny kolontsaina velona rehetra, ny mariachis dia niseho tamina fasana ary tamin'ny volana Oktobra ilay Halloween tsy mahomby.
Raha taonjato maro talohan'ny nanjakan'ny fitondrana politika no nitondra ny fomba amam-panaony, ankehitriny ny fitondrana ny kolontsaina sy ny toe-karena no mitondra ny azy.
Ny fialantsasatra katolika iray hafa tena ankalazaina dia ny Seminera Paska. Izy io dia ankalazaina indrindra amin'ny alàlan'ny fanamafisana lehibe any Antigua izay misy filaharana lava sy karipetra tsara tarehy antsoina kapoaka fikosoham-bary, miloko ary misy voankazo sy voninkazo, ireo lehilahin'ny filaharana, miakanjo volomparasy, voahitsakitsahany. Alohan'ny hahatongavan'ny Krismasy dia misy fety nentim-paharazana izay manana endrika fombafomba fanadiovana: angonin'ny olona ny fako taloha rehetra ary hodorany eo anoloan'ny tranony amin'ny 7 Desambra.
Antsoina ity antoko ity devoly mandoro.
Ary avy eo eny, ny Navidad miaraka amina filaharana, afomanga ary fizarana nahaterahana bebe kokoa ao am-piangonana. Ny 24 Desambra no fankalazana ny ny trano fandraisam-bahiny izay amin'ny alin'ny 24 dia misy ny filaharana miaraka amin'ny sarin'i Maria Virjiny sy ny Ankizy Jesosy ary ny ankizy miakanjo mpiandry ondry miaraka amin'ny ampongatapaka, castaneta ary labozia na fanilo. Rehefa mandeha izy ireo dia mihira hira sy valim-pitiavana Krismasy ary miaraka amin'ny mofo mamy na tamale sasany izay maharitra hatramin'ny misasakalina.
Una festival izay mampifangaro ny Kristiana amin'ny pre-Hispanic dia fetin'ny Kristiana Mainty any Esquipulas. Fomban-drazana nozarain'i El Salvador, Honduras ary Guatemala ary misy ifandraisany amin'ireo andriamanitra mainty ao Ek Chua na Ek Balam Chua. Tena mitranga izany any Chiquimula, amin'ny sisin-tany telo, amin'ny Janoary.
Ny fomba amam-panao hafa, izay tsy misy ifandraisany amin'ny Kristianisma intsony, dia ny Hazakaza-trondro na lalao an'ny Roosters, izay angatahana fahazoan-dàlana amin'ireo olomasina sy Reny Tany ary ireo mpitaingina mitafy akanjo, fehiloha, volom-borona ary kofehy maroloko.
Ary farany, raha toa ka manilika ireo fety ara-pivavahana isika, dia afaka mifandray amin'izany fankalazana ara-tsosialy bebe kokoa. Mankalaza ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana Ary eto Goatemalà, mazàna ianao dia mandoro roketa amin'ny 5 maraina ary mihinana tamale miaraka amin'ny sôkôla sy mofo frantsay ho sakafo maraina. Ho an'ny ankizy, tsy azo hadinoina ilay fety. Ary rehefa hivady dia ny zavatra mahazatra, farafaharatsiny amin'ny fianakaviana fomban-drazana indrindra, dia ny mangataka amin'ny rafozana ho an'ny tanan'ny sakaizany ny mpampakatra ary hanao fety iray samy hafa misaraka, iray ho azy ary iray ho an'ny izy.
Ny marina dia ireo firenena amerikana nanana fisian'i Espana betsaka kokoa, noho ny haren'izy ireo sy noho ny famoronana zava-kanto manoloana ny voninahitry ny satroboninahitra, dia mitahiry fomba amam-pinoana sy ara-tsosialy maro izay efa nohadinoin'ny firenen-kafa. na milamina kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Guatemala » Fomba amam-panao any Goatemala
Ny Lohasahan'i Nuria